यस्ता छन्: फर्सीको मुन्टा खानुका फाइदै फाइदा – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / यस्ता छन्: फर्सीको मुन्टा खानुका फाइदै फाइदा
यस्ता छन्: फर्सीको मुन्टा खानुका फाइदै फाइदा
admin June 21, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 177 Views
यस्ता सरल उपायले आउँन दिदैन पति-पत्नी बीच कुनै फाटो, सम्बन्ध सधैं मधुर रहनेछ !
तपाईको तातो पानी पिउने बानी छ भने, एकचोटी नछुटाई पढ्नुहोस! जानकारी सेयर गरौ
हरियो सागपात मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभ`दायक मानिन्छ । अझ हरियो साग खानाले आँखा तेजिलो हुने चिकित्स`कहरु बताउँछन् । हरियो सागसब्जी`मध्ये फर्सीको मुन्टामा अझ विशेष गुण हुन्छ । जुन मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी हुन्छ ।
त्यसो त फर्सी पनि खानु हाम्रो स्वास्थ्य|को लागि निकै नै लाभकारी हो । तर, फर्सीको पात वा मुन्टा खानाले हामी विभिन्न रोगबाट जोगिन सक्छौँ । फर्सीको पातको साग वा फर्सी`को मुन्टा खानुको फाइदा`बारे सबैलाई थाहा नहुन सक्छ ।
फर्सीको साग विभिन्न पौष्टिक तत्वले भरि`एको हुन्छ । फर्सीको मुन्टा भिटामिन ई, सी, ए, बी-६, पोेटासियम, फोलिक एसिड, क्याल्सियम, कपर, प्रोटिन, म्याग्नेशियम, आइरन, फाइ`बर, फस्फोरस जस्ता खनिज पदार्थ`को राम्रो स्रोत हो । मानव स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नको लागि शरीरमा यी सबै खनिज तथा पौष्टिक तत्व`को आवश्यकता पर्दछ ।
युएस`डीए नेशनल न्युट्रिएन्टको अध्य`यन अनुसार फर्सीको पातमा यति धेरै गुणहरु हुन्छ कि जसले खतरनाक रोगबाट जोगिन मद्दत गर्छ । फर्सीको साग आफ्नो नियमित भोजनमा खानु`हुन्छ भने उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, क्यान्स`र जस्ता ख`तरनाक रोग`बाट सुरक्षित बन्न सकिने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
फर्सीको पातमा पाइने एन्टी–अक्सीडेन्टले ब`ढ्दै गरेको उमेरलाई छेक्दै जवान देखाउनमा सहयोगी हुन्छ । मानिस`हरुमा उच्च कोलेस्ट्रोलको समस्याले पीडा दिएको हुन्छ । तर, कोलेस्ट्रोलको समस्याबाट राहत पाउनका लागि फर्सीको मुन्टाको साग भने निकै उ`त्तम मानिन्छ । फर्सीको पातमा पाइने फाइब`रले कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्नुका साथै तपाईँको मुटुलाई पनि स्वस्थ राख्नमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।
त्यस्तै फर्सीको मुन्टाको साग खाँदा आँखा तेजि`लो बन्छ । फर्सीको पातमा भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । जुन हाम्रो आँखाको लागि राम्रो मानिन्छ । यसले प्रज`नन क्षमतामा समेत वृद्धि गर्ने गर्छ । फर्सीको मुन्टाको सागले नष्ट भएको टेस्टी|कुलर र स्पर्म बन्ने प्रक्रिया`लाई मद्दत पुर्याउँछ । जसको मद्दतले प्रजनन क्षमतामा वृद्धि हुन्छ ।
त्यस्तै, छाला`का सुन्दर बनाउँ पनि फर्सी|को मुन्टा विशेष मान्छि । फर्सीको पातमा पर्याप्त मात्रामा भिटामीन सी पाइन्छ । जुन तपाईँको छालाको ला|गि फाइदा`जनक हुन्छ । भिटामीन सी ले छाला`मा भएको मृत तन्तुलाई जीवित बनाउन मद्दत गर्नुका साथै छालाला|ई स्वस्थ बनाइ राख्छ ।
यसले मधुमेह रोग नियन्त्रणमा पनि मद्दत पुर्‍याउँछ । फर्सी`को मुन्टामा हाइपोग्लिसिएमिक नामक तत्व हुन्छ जसले ग्लुकोजको मात्रालाई कम गर्नमा मद्दत गर्छ ।
त्यतिमात्र नभएर फर्सी`को मुन्टामा खतरनाक रोग क्यान्स|रालाई समेत निको पार्ने गुण हुन्छ । फर्सीको पातमा पाइने फाइबरले क्यान्सर कोषीकाहरुलाई रोक्नमा मद्दत पुर्याउने चिकित्सकहरु बता`उँछन् । यसले पाचन प्रणाली|लाई स्वस्थ राख्छ, पाँचन प्रणा`ली स्वस्थ हुनु भनेको अधिकांश रोगबाट छुटकार पाउनु पनि हो ।
Previous प्युठानमा घर भत्किँदा एकै घरका यी परिवारहरूमा दियो यस्तो पीडा…
Next पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार ७ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
किन ख’तरा हुन्छ ३० वर्ष क’टेपछि बच्चा जन्मा’उँदा ? जा’न्नुहोस् यस्ता छन् कारणहरु
२५ वर्षको उमेरमा गर्भवती हुँदा सजिलो मात्र हुँदैन, आमा र शिशु दुबैका लागि सुरक्षित पनि …